leeyihiin xasilloonida kiimikada wanaagsan iyo waxqabadka heerkulka sare ee loo adeegsaday filim adag, bartilmaameedka, walxaha alxanka, buufinta, qalabka goynta, warshadaha birta, aerospace iyo meelaha kale. Sida dhoobada birta iyo tungsten ku saleysan carbide daawaha wakiil hadhuudhka, si weyn u hagaajin kartaa waxqabadka daawaha
Caanaha molecular VC
Xeerka CAS 12070-10-9
Barta dhalaalida 2800'C
Cufnaanta 5. 41g / cm3
Isticmaala leeyihiin xasilloonida kiimikada wanaagsan iyo waxqabadka heerkulka sare Isticmaalay filim aad u daran, bartilmaameed, qalabka alxanka, buufinta, qalabka goynta, warshadaha birta, erospace iyo meelaha kale. Sida dhoobada birta iyo tungsten ku saleysan carbide alloygrain filter, waxay si weyn u wanaajin kartaa waxqabadka daawaha
Qaaciddada Molecular: VC
Miisaanka molikalka: 62.95
Guryaha: Caradium loo yaqaan 'Vanadium carbide' waa budada macdanta ah ee cawlan oo leh 19.08% kaarboon (cufnaan)
ka tirsan sodium chloride cubic crystal system.
Cufnaanta (g / mL, 25 ℃): 5.77
Cufnaanta uumiga qaraabada (g / mL, hawo = 1): lama go'aamin
Barta dhalaalida (℃): 2810
Bar kulaylka (℃, cadaadiska Hawada): 3900
Xasilloon heerkulka caadiga ah iyo cadaadiska. Ka fogow maadada oksaydhka. Micro Vickers adkaanta (xamuul 50g) 2944kg / mm, waxay leedahay bar dhalaal sareeya (2830 ℃) .use Waxaa loo isticmaali karaa sida miiraha hadhuudhka ee daweynta adag, qalabka jarista iyo warshadaha sameynta birta, taas oo si cad u hagaajin karta astaamaha.
Waxaa loo adeegsaday jarista daawaha adag, soo saarista duugista - filim iska caabin ah iyo filim semiconductor ah.
Caradium loo yaqaan 'Vanadium carbide' oo leh dhabar adag, barta dhalaalaysa iyo xoogga heerkulka sare iyo astaamaha kale ee guud ee carbide biraha kala guurka ah, iyo sidoo kale habdhaqanka wanaagsan iyo kuleylka kuleylka, sidaas darteed birta iyo birta birta ah, isku dhafka adag, alaabada elektarooniga ah, qalabka wax soo saarka iyo heerkulka sare. meelaha kale waxay leeyihiin codsiyo kala duwan. Waxaa lagu soo warramey suugaanta in xasiloonida xaragada ee carbide-yada kaladuwan ay go'aamiso saameynta xannibaadda, iyo amarka saameynta xannibaadda waa VC> Mo2C> Cr3C2> NbC> TaC> TiC> ZrC. Ku darida carbide-ka 'vanadium' sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa wajiga adag si si weyn loogu wanaajiyo adkaanta iyo nolosha carbide sibidhka leh, loona yareeyo magnetization dheregsan, dib-u-habeyn, xoog xoog leh oo magnetic ah, wax soo saarka tamarta magnetka, soo-celinta magnetic iyo Curie heerkulka carbide-ka sibidhka ah si loo soo saaro daawaha aan magnetic.
Iyada oo ay sii kordheyso isticmaalka carbide-ka sibidhka ah ee hubka iyo aaladaha tiknoolajiyadda sare, cilmiga sayniska iyo teknolojiyadda iyo tamarta nukliyeerka, waxaa lagama maarmaan ah in la sii wanaajiyo waxqabadka WC alloy Habka ugu fiican ayaa ah in la sifeeyo hadhuudhkiisa isla markaana loo diyaariyo ultrafine ama xitaa carbide sibidh leh oo habeysan. Wixii nanometer-ka budada carbide ee sibidhka ah, koritaanka miraha wuxuu dhacaa markii la jajabiyey 1 150 ℃. Haddii heerkulka kala-baxa ee ka-hortagga uu sarreeyo, ma aha oo kaliya wax adag in la ciyaaro ka-hortagga, laakiin xitaa wuu ka sii daraa waxqabadka carbide-ka sibidhka ah. Sidaa darteed, baahida loo qabo joojiyeyaasha nano-hadhuudhka ayaa aad iyo aad u sii degdeg badan, iyo diyaarinta budada nano-vanadium carbide waxay soo jiidatay dareenka cilmi baarayaal badan. Maaddaama isku xirnaanta kaarboonku ay oksijiin sii kordheyso kororka heerkulka, iyo isku xirnaanshaha biraha kaladuwan ee oksijiinku uu hoos u dhacayo kororka heerkulka, birta u dhiganta ama carbide waxaa lagu diyaarin karaa kaarboonka yareynta oksaydhka heerkulka sare. Dhimista Kaarboonka ee alaabada ugu muhiimsan ee CO, CO2, ayaa meesha ka saari kara badeecada iyada oo la adeegsanayo ifafaale kale oo wasakh ah. Sidaa darteed, habka yareynta carbothermal wuxuu leeyahay astaamaha habka fudud, helitaanka sahlan ee alaabta ceeriin, soo noqnoqod wanaagsan iyo wixii la mid ah, wuxuuna leeyahay qiime wax ku ool ah oo sarreeya.
Caradium loo yaqaan 'Vanadium carbide' oo leh adkeyn sare, barta dhalaalaysa iyo xoogga heerkulka sare iyo astaamaha kale ee guud ee carbide birta kala guurka ah, iyo sidoo kale la socodsiinta korantada iyo kuleylka wanaagsan, sidaa darteed birta iyo birta birta ah, isku dhafka adag, alaabada elektarooniga ah, soo saareyaasha iyo qalabka heerkulka sarreeya. meelaha kale waxay leeyihiin codsiyo balaaran. Kuwaas waxaa ka mid ah, carbide vanadium waxaa lagu dari karaa bir si loo hagaajiyo sifooyinka guud ee birta sida adkeysiga xirashada, iska caabinta daxalka, adkaanta, xoogga, ductility, adkaanta iyo adkeysiga kuleylka ee kuleylka, waxaana loo isticmaali karaa sida waxyaabo xirashada xirmooyinka ee goynta kala duwan iyo xirtaan qalab adkaysi u leh. Intaa waxaa sii dheer, kaarbide-ka 'vanadium' oo ah soo-saare cusub ayaa si ballaaran loo adeegsaday sababtoo ah firfircoonidiisa sare, xulashada, xasilloonida iyo iska caabbinta "sumowga sunta" ee falcelinta hydrocarbon. Intaas waxaa sii dheer, kaarbiiid vanadium sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa ilaha kaarboonka cusub si loo soo saaro dheeman. Doorka ugu muhiimsan ee vanadium carbide waa in loo adeegsadaa ka-hortag badar ahaan berrinka carbide-ka iyo cermets-ka sibidhka ah, kaas oo si wax ku ool ah uga hortagi kara koritaanka miraha WC ee habka kala-soocidda.
Hore: Aluminium Carbide Powder, Al4C3
Xiga: Budada Niobium Carbide, NbC
Warshadaha budada ah ee loo yaqaan 'Vanadium aluminium carbide'
Vanadium Aluminium carbide Warshad
Vanadium Aluminium carbide soo saaraha budada ah
Vanadium Aluminium carbide Soosaarayaasha
Vanadium aluminium carbide budada Qiimaha
Qudaarta budada aluminium Vanadium
Soo-saaraha budada carbide Vanadium